करिश्माको शिक्षकसंग अफेयर सुनेपछि सलोनको छुट्यो पसिना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
करिश्माको शिक्षकसंग अफेयर सुनेपछि सलोनको छुट्यो पसिना
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र 'बाबु कान्छा'मा नायक-नायिकाको भूमिकामा देखा पर्न लागेका सलोन बस्नेत र करिश्मा श्रेष्ठ वास्तविक जीवनमा पनि एक-अर्काको नायक नायिका हुन् । उनीहरु विगत तीन वर्ष देखि प्रेम-सम्बन्धमा छन्।
एक अन्तर्वार्तामा करिश्माले आफू पाँच कक्षामा पढ्दा ट्युसन पढाउने शिक्षकसंग अफेयरमा रहेको बताएकी छिन्। उनको कुरा सुनिरहेका सलोनले अचम्म परेको जस्तो देखाएपनि त्यसले आफूलाई असर नपर्ने बताएका थिए। उनीहरुका अनुसार, उनीहरु प्रेमी-प्रेमिका संगै एक-अर्काको नजिकको साथी हुन्, जसले आफ्नो मनको कुरा खोल्न सक्छ।
सलोन र करिश्माले आफूहरु वास्तविक जीवनमै जोडी भएकोले चलचित्रको पर्दामा केमेस्ट्री पनि राम्रो देखिने बताएका छन्। उनीहरुले काम गर्न पनि सजिलो भएको, तर एक-अर्काको अनुहार हेरेर सिन गर्न नसकेको अनुभव समेत बताएका छन्।
चलचित्र 'बाबु कान्छा' असार २९ गते देखि प्रदर्शनमा आउंदै छ। यस चलचित्रलाई सलोनका बुवा अर्थात सोभित बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन्।